Iingxaki eziqhelekileyo kunye nezisombululo zohlobo lwakho lwePhepha
Nazi ezinye zeengxaki eziqhelekileyo ezixeliweyo ngabanini bePhepha lePhepha elimhlophe kwiiforum zoluntu. Uninzi lwezi ngxaki, kukho amanyathelo okusombulula ngokukhawuleza.
Imifanekiso yeziporho kwiscreen
UG ukubamba ngumboniso otyhafileyo wokubhaliweyo okanye wemizobo eshiyekileyo kwiphepha langaphambili nasemva kokuba uye phambili.
Ukuba udibana nokukhuthazwa kwesiboniso sangaphambili kwi-Kindle Paperwhite, hlaziya isikrini. Ukuhlaziya isikrini ngelixa ufunda, cofa kufutshane nomphezulu wesikrini ukubonisa ibar yesixhobo, emva koko ucofe naphi na kwiphepha. Umboniso ukhanyisa ngokufutshane mnyama njengoko isikrini sihlaziya kunye nebar yesixhobo iyanyamalala. Ukusuka kwiscreen seKhaya, ukuvula incwadi okanye omnye umxholo kubangela ukuba iphepha lihlaziye.
Awunakho ukuqhagamshela kwi-Wi-Fi ngokuzenzekelayo
I-Kindle Paperwhite iskena ngokuzenzekelayo iinethiwekhi ze-Wi-Fi ezikuluhlu lwesixhobo sakho. Ukuba inethiwekhi enye ifunyenwe, isixhobo siya kuzidibanisa ngokuzenzekelayo. Ukuba iphasiwedi iyafuneka, isikrini siyakucela ukuba ufake olo lwazi. Ngokubanzi, inkqubo iyakhawuleza kwaye kulula.
Ngamaxesha athile, nangona kunjalo, kuya kufuneka unxibelelane ngesandla nenethiwekhi ye-Wi-Fi. Landela la manyathelo:
Ukuba uthungelwano ofuna ukudibanisa kulo luvela kuluhlu, cofa inethiwekhi.
Ukuba inethiwekhi ofuna ukudibanisa kuyo ayiveli kuluhlu:
Ibhokisi yencoko yababini ekuthiwa Ngenisa iWi-Fi Network iyavela, kunye nekhibhodi yescreen.
Usebenzisa ikhibhodi ekwisikrini, faka igama lenethiwekhi kwaye, ukuba kufanelekile, iphasiwedi.
Thepha iqhosha eliPhambili.
Sebenza ngothotho lwezikrini, ukufaka ulwazi olunxulumene nenethiwekhi, kubandakanya uhlobo loqhagamshelo, idilesi ye-IP, kunye nohlobo lokhuseleko.
Phambili kwizikrini ngokusebenzisa iintolo ezinyukayo nezisezantsi.
Ukuba kukho imfuneko, nxibelelana nomntu osete uthungelwano ngoncedo lokugcwalisa olu lwazi.
Xa lonke ulwazi oluyimfuneko lufakiwe, cofa iqhosha lokuQhagamshela ukujoyina inethiwekhi.
Ukuba i-Kindle Paperwhite iqhagamshelwe kwinethiwekhi yakho yasekhaya kodwa ayinakho ukunxibelelana neAmazon, unokufuna ukuphinda uqalise unxibelelwano. Cofa Imenyu → Useto → Iinethiwekhi ze-Wi-Fi, emva koko ucofe inethiwekhi enophawu lokujonga ngasekhohlo. Xa Ulibale Inethiwekhi? ibhokisi yencoko yababini iyavela, cofa uLibala. Kuya kufuneka ukhethe kwakhona inethiwekhi kwaye ufake ipassword (ukuba iyafuneka).
ulawulo lokuzalwa oluqala ngo
Ukuba unengxaki ekunxibelelaneni nenethiwekhi yakho yasekhaya, vula i-Wi-Fi router, linda okungenani imizuzwana engama-60, emva koko uyiplagi kwaye ulinde inethiwekhi ukuba iqale kwakhona.
Ibhetri ikhupha ngokukhawuleza
Ibhetri kufuneka ihlale ubuncinci iveki okanye ezimbini ngokusekwe kwisiqingatha seyure yokufunda yonke imihla ngokusetyenziswa okuncinci kweengcingo kunye nokukhanya okusetiwe kwi-10. Okwangoku, ibhetri kufuneka ihlale ubuncinci iveki okanye ezimbini nokuba kukusetyenziswa kwemihla ngemihla ngaphandle kwamacingo.
Ukuba uqaphela ukuba ibhetri ihla ngexesha elifutshane, ingxaki inokubangelwa ngumxholo ongafakwanga. Ngokwesiqhelo, ngalo lonke ixesha usongeza umxholo kwi-Kindle Paperwhite, isalathisa izinto. Oku kukuvumela ukuba ukhangele amagama okanye amagama ngaphakathi kwincwadi ethile kunye nakuwo wonke umxholo kwesi sixhobo.
Ngamaxesha athile, incwadi iyasilela kwisalathiso esifanelekileyo, ke isixhobo sizama ngokungapheliyo ukusalathisa, sibangela ukuba ibhetri yehle. Ukufumanisa ukuba yingxaki na le, thatha amanyathelo alandelayo:
Ukusuka kwisikrini saseKhaya, cofa kwiKhonkco lokuKhangela.
Qinisekisa ukuba wonke umbhalo uboniswa ngasekunene kwebhokisi yokukhangela.
Kwibhokisi yokukhangela ebonakalayo, chwetheza igama elingaqhelekanga okanye umtya nje woonobumba.
Musa ukukhetha igama eliqhelekileyo njenge umntu okanye i.
Cofa utolo ecaleni kwebhokisi ukuqala ukukhangela.
Jonga izinto ezingafakwanga.
Ukujonga izinto ezingafakwanga ngaphandle, jonga ezantsi kuLuhlu lweZiphumo zeScreen, emva kweziphumo zophendlo.
Ukuba unento engaxutywanga, yisuse ngokucinezela kwaye ubambelele kuyo kwaye ukhethe ucime kwimenyu ebonakalayo.
Ukuba ufumene lo mxholo kwiAmazon, uya kufumaneka kuwe ngokukhuphela kwakhona kwiLifu. Komnye umxholo, qiniseka ukuba une-backup. Iisampulu ezivela eAmazon kufuneka zikhutshelwe kwakhona kwiphepha leAmazon lencwadi, ke yenza inqaku labo ngaphambi kokucima, ukuba ufuna ukwenza isampulu yomxholo lowo.
Shaja ibhetri yakho ngokupheleleyo.
ungathatha i-tylenol nge-tramadol
Yenza inqaku lomhla kwaye ugcine ukuba ithatha ixesha elingakanani ibhetri ukukhupha. Kuya kufuneka ulinde iintsuku ezimbalwa ukuze ubone ukuba ingxaki yebhetri isisombulule. Xa ugqibe kwelokuba ibhetri isebenza ngesiqhelo, ungabeka izinto ezikhubekisayo (ezingafakwanga) kwi-Kindle Paperwhite yakho ngokukhuphela kwakhona kwilifu, ulayishe ecaleni kwikhompyuter yakho, okanye uhlengahlengise umxholo kwiAmazon.
Ukuba ngaphezulu kwento enye kuye kwavela kuluhlu lomxholo ongafakwanga, kwaye ufuna ukubuyisela ezi zinto kwi-Kindle Paperwhite, yongeze enye ngexesha kwaye ulinde ukuba nganye igqibe ukwenza isalathiso ngaphambi kokufaka elandelayo. Ngale ndlela, ukuba kukho ingxaki ngomxholo othile, unokuchonga ngokulula ukuba yeyiphi incwadi engumoni.
Iphepha lakho elimhlophe alihambelani phakathi kwezixhobo
Isici se-Amazon's Whispersync sikwenza ukuba uhambe ngokungenamthungo ekufundeni kwi-Kindle Paperwhite yakho ekufundeni kwi-smartphone okanye kwikhompyuter yakho. Ukongeza, i-Whispersync yeLizwi ikuvumela ukuba uvumelanise phakathi kwePhepha lakho lePhepha kunye nohlobo oluVakalayo lwencwadi omamelayo kwisixhobo sakho somculo esikhethiweyo kunye nohlelo oluVakalayo.
Xa uvula i-e-ncwadi kwenye ifowuni, uhlala ukhuthazwa ukhetho lokuya kweyona ndawo ikude ifundwayo. Ukuba oku akwenzeki, jonga oku kulandelayo:
Unxibelelwano lweeseva zeAmazon: Ukuze i-Whispersync isebenze, izixhobo kufuneka zixhunywe kwiiseva zeAmazon. Qinisekisa ukuba i-Kindle Paperwhite okanye esinye isixhobo sine-Wi-Fi okanye uqhagamshelo lwe-3G xa uvumelanisa.
Ukucwangciswa kongqamaniso: Ukuba izixhobo zakho zixhunyiwe kwiiseva zeAmazon kwaye ungqamaniso awusebenzi, jonga useto lokuvumelanisa. Ngena kwiAmazon uze uye kwi Lawula iphepha lakho lohlobo . Cofa kuLawulo lwezixhobo zakho, kwicala lasekhohlo lephepha. Skrolela emazantsi ephepha kwaye uqinisekise ukuba ukhetho lweSyncronization lusetelwe kuVuliwe.
Isethingi yoNgqamaniso ichaphazela konke izixhobo kunye nawo wonke umxholo onxulumene neakhawunti yakho; awunakukhetha ukuvula okanye ukucima ukungqamanisa isixhobo okanye isixhobo esithile okanye incwadi ethile ye-e. Ukuba uneeNdidi ezininzi kwiakhawunti yakho (umzekelo, Iindidi ezizezakho, iqabane lakho kunye nabantwana bakho) kwaye wonke umntu ufunda incwadi enye ye-e, i-Kindle iyahambelana kwiphepha lokugqibela elifundelwe wonke umntu. Kule meko, unokufuna ukucima ungqamaniso.
Ungaseta kwakhona iphepha lokugqibela elifundwe kwiThala leThala leencwadi lakho kuLawulo lwakho lohlobo. Ecaleni kwesihloko esifanelekileyo, cofa ibhokisi yeZenzo. Ukusuka kwimenyu ehlayo ebonakalayo, khetha u-Cima iphepha eliFundileyo.
Isikrini saseKhaya sibonisa izinto ezingalawulekiyo
Ungabonisa izinto kwiscreen seKhaya ngoku, ngesihloko, ngoMbhali, okanye ngokuQokelela. Ngamaxesha athile, izinto aziboniswanga ngokulandelelana kwazo.
Ukusombulula le ngxaki, yenza ukuvumelanisa ngokukhawuleza:
Ukusuka kwisikrini saseKhaya, cofa kwi icon yeMenyu.
Thepha Vumelanisa kwaye ujonge izinto.
Vumelanisa kwaye ujonge izinto lukhetho lwesihlanu kwimenyu eyehlayo (ukhetho lwesine lwesibini Kindle Paperwhite). Isikrini sakho saseKhaya sibonisa izinto ngokulandelelana kwazo.
Qinisekisa ukuba iwotshi kwi-Kindle Paperwhite yakho icwangciselwe ixesha elichanekileyo. Ungaseta i-Kindle Paperwhite 3G yokuhlaziya iwotshi ngokuzenzekelayo.
Isixhobo asiyiboni iphasiwedi yakho
Ungasebenzisa iphasiwedi ukukhusela ukufikelela kwi-Kindle Paperwhite. Ukuba iphasiwedi oyibekele isixhobo sakho ayisebenzi, unokhetho olunokusombulula:
Qiniseka ukuba ufake iphasiwedi ngokuchanekileyo.
Zama umahluko wegama eligqithisiweyo. Mhlawumbi uyichwetheze ngendlela engeyiyo xa ubuqala ukuyicwangcisa.
Ukuba uneNdidi ezingaphezu kwenye ekhayeni lakho, Qiniseka ukuba ufake igama eligqithisiweyo kwisixhobo esifanelekileyo.
Ndiyathemba ukuba elinye lala manyathelo okusombulula ingxaki kuyanceda kuba ukuseta kwakhona igama lakho eliyimfihlo kakhulu. Isisombululo sisula wonke umxholo kwi-Kindle Paperwhite kwaye siyikhuphe kwiAmazon. Ukufakela zonke izinto zakho kunokwenziwa, kodwa kuthatha ixesha.
Ukusetha kwakhona iphasiwedi yakho, chwetheza 111222777 kumhlaba wegama eligqithisiweyo uze ucofe u-Kulungile. Uhlobo lwakho luyacinywa. Ngoku kuya kufuneka ubhalise isixhobo kwakhona kwiAmazon kwaye ukhuphele umxholo kwakhona njengoko ufuna kwiVenkile yakho yeAmazon.
indlela yokusebenzisa imela
Iimpawu zokurhoxa kwe-spironolactone
Ngaba i-tylenol ingakwenza ulale
yeyiphi ishedyuli valium
Ungayibonisa njani igrafu kwimilinganiselo
ubiquinol coq10 iziphumo ebezingalindelekanga
Yintoni elungileyo ye-metamucil